Shirkadda profile-Rech Chemical Co.Ltd
Rech Chemical Co.Ltd waxaa la aasaasay 1991 iyadoo ah shirkad ku takhasustay soo saarista iyo qaybinta alaabooyinka raadraaca, kuna lug leh alaabta ceeriin ee warshadaha, nafaqada dhirta, caafimaadka xoolaha. Waqtigaan la joogo, Rech Chemical wuxuu u koray shirkad bixiyaha ugu weyn ee granular sulphate mono granular.
Rech Chemical Co.Ltd waxay horumarisay shirkad horseed u ah wax soosaarka Shiinaha. Waxaan ka shaqeynaa ganacsi caalami ah iyo adeeg dhameystiran iyo saadka. Hadafkeenu waa in aan siino alaab tayo sare leh si kor loogu qaado caafimaadka iyo waxqabadka xoolaha iyo dhirta.
Rech Chemical Co.Ltd waa shirkad aad u macaamil badan isla markaana aaminsan in la dhiso xiriir dheer oo tayo leh macaamiisheenna iyadoo la siinayo adeeg macmiil aan caadi ahayn oo aad ku kalsoon tahay oo aad ku kalsoon tahay.